Chelmo - ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယောင်္ကျားဆန်တယ်လို့ ထင်နေသလား?
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယောင်္ကျားဆန်တယ်လို့ ထင်နေသလား?
လူမှာ ယောင်္ကျားလေး ဦးနှောက်၊ မိန်းကလေး ဦးနှောက် ဆိုတာရှိပါတယ်။
ကိုယ်ကတော့ ဘယ်လိုဦးနှောက်ပိုင်ရှင်လဲ ဆိုတာသိချင်ရင် မေးခွန်းလေးတွေ ဘယ်နှစ်ခုမှန်လဲဆိုတာ မှတ်ထားပြီး အဖြေကို ဖတ်ကြည့်နော်......